यौन सम्बन्धमा कति अवधिको राम्रो ? श्रीमतिको सन्तुष्टी कसरी थाहा पाउने ? - Gokarna News from Nepal
शुक्रबार, भदौ ०६, २०७६ by Gokarna News
पुरुषले योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएदेखि वीर्यस्खलनसम्मको समयलाई Intravaginal 3jaculation L-atency Time भनिन्छ । यो समय व्यक्ति–व्यक्तिअनुसार फरक–फरक हुन्छ र एक व्यक्तिको पनि फरक–फरक समयमा फरक–फरक हुन सक्छ । सामान्यतस् उमेर बढ्दै जाँदा उक्त समय केही घट्छ । एक अध्ययनले सालाखाला यसको समय ५ दशमलव ४ मिनेट रहेको देखाएको छ ।
यहाँ भनिरहनु पर्दैन कि यौनसम्पर्कको समय व्यक्ति, जोडी अनि परिस्थितिअनुरूप फरक–फरक हुन्छ । Journal of S-exual Medicine मा गरिएको एक अध्ययनमा s3x therapist ले १–२ मिनेटको यौनसम्पर्कको समयलाई ‘धैरै छोटो’, ३–७ मिनेटको समयलाई ‘पर्याप्त’ अनि ७–१३ मिनेटको समयलाई ‘वाञ्छनीय’ मानिएको छ ।
अवैध सम्बन्धको पोल खुल्ने डरले महिलाले गरिन् प्रेमीको हत्या, होटल बुक गरेर राख्थे यौनसम्पर्क
२८ वर्षकी यी सुन्दर महिला : १३० पुरुषसँग यौन सम्बन्ध ! यस्तो छ कारण